I-Moonstone intsingiselo-Uhlaziyo olutsha lwe-2021 -Ividiyo enkulu.
Moonstone intsingiselo yesinti Ikristale yelitye lenyanga ihlala isetyenziselwa ubucwebe njengomsongo, iringi, amacici, isongo kunye neependenti.
Thenga ilitye lenyanga yendalo kwivenkile yethu
I-Moonstone yi-potassium ye-potassium aluminium silicate kunye ne-formula ye-chemical (Na, K) i-AlSi3O8 kunye neqela le-feldspar.
Igama layo livela kwindlela ebonakalayo, okanye i-sheen, ngenxa yokungafani kokukhanya ngaphakathi kwinqanaba elincinane eliququzelelwe rhoqo kwi-feldspar layers (lamellae).
Sisebenzise ilitye kwizinto zobucwebe iminyaka eliwaka, kubandakanya nempucuko yakudala. AmaRoma ayalixabisa eli litye linqabileyo, njengoko babekholelwa ukuba lizalwe yimitha eqinileyo yeNyanga. Omabini amaRoma kunye namaGrike adibanisa ilitye kunye noothixo babo benyanga. Kwimbali yakutshanje. Yaduma ngexesha le Ubugcisa obutsha ixesha. Umkhandi wegolide waseFrance uRené Lalique kunye nabanye abaninzi benze ubungakanani bezacholo kusetyenziswa eli litye.
Elona litye liqhelekileyo le-amularia ye-adularia, eye yabizwa indawo yendawo yokuqala yezimbiwa kufutshane neMt. Adular eSwitzerland, ngoku idolophu yaseSt Gotthard. I-plagioclase feldspar oligoclase ikwavelisa imifuno yamatye. I feldspar ngethanga kunye neopalescent schiller. Elinye igama yi-hecatolite.
I-Orthoclase kunye nealbite
Intsingiselo yenyanga kunye neepropathi
Yintoni elungileyo yelitye lenyanga?
Ngaba ilitye lenyanga libiza?
Ngubani ofanele ukunxiba ilitye lenyanga?
Ngaba ubucwebe belitye lenyanga bulungile kwimisesane yokuzibandakanya?
Ngaba unxiba ilitye lenyanga yonke imihla?
Ngaba ilitye lenyanga liyakukhusela?
Ngaba ukukhanya kwenyanga eluhlaza okwesibhakabhaka kukhanya ebumnyameni?
Wazi njani ukuba ilitye lenyanga liyinyani?
Ngaba ilitye lenyanga linokungena emanzini?
Ngaba i-opal kunye nelitye lenyanga ziyafana?
Ngaba ilitye lenyanga liligugu lokwenyani?
Ndinganxiba ilitye lenyanga ukulala?
I-crystal yenziwe ngeentlobo ezimbini ze-feldspar, orthoclase ne-albite. Ezi zimbini zezilwanyana zidibanisa. Emva koko, njengoko i-coal mineral cools, i-intergrowth of orthoclase kwaye i-albite ihlukanisa kwi-stacked, i-alternate layers.
I-Adularescence yimeko eluhlaza okwesibhakabhaka ebonisa ubume bekhabochon yolawulo lwelitye lenyanga. I-phenomena ye-shimmer ivela ekusebenzisaneni kokukhanya kunye nocingo lweekristali ezincinci ze "albite" elityeni. Ngelixa ubukhulu boluhlu lwezi kristali zincinci zichonga umgangatho we-blue shimmer. Ke ngoko, mncinci umaleko, kungcono ukukhanya okuluhlaza okwesibhakabhaka. Oku kuhlala kubonakala njengokukhanya kokukhanya.
Iidiphozithi zenzeka eArmenia (ikakhulu ukusuka eLake Sevan), nase-Australia, i-Austrian Alps, Mexico, Madagascar, Myanmar, Norway, Poland, India, Sri Lanka nase United States.
Ngaphaya koko, intsingiselo yelitye lenyanga yiFlorida State Gemstone (USA). Yayityunjwe ngoluhlobo ngo-1970 ukukhumbula ukubekwa komhlaba eNyangeni, okwaphuma eKennedy Space Centre. Ngaphandle kokuba lilitye elinqabileyo likaRhulumente waseFlorida, ayenzeki ngokwendalo kurhulumente.
I-Feldspars liqela lelitye elenza iiminerali ze-tectosilicate ezenza malunga neepesenti ezingama-41 zomhlaba womhlaba welizwekazi ngokobunzima.
I-crystallize ukusuka kwi-magma njengeemvini emacaleni omabini kunye neentambo ezinqabileyo kwaye zikhoyo kwiintlobo ezininzi zeeramorphic rock.
Endala njengenyanga ngokwayo, intsingiselo yelitye ilele ngaphakathi kwamandla alo. La mandla anokukondla, anike inkanuko, kwaye avuse amandla akho obufazi. Inokukuphilisa kwaye ikukhokele kwindlela yakho yangaphakathi. Endala njengenyanga ngokwayo, intsingiselo yelitye elinqabileyo lilele kumandla alo.
Isampula evela eIndiya
Intsingiselo yenyanga yenyanga yenyusa intuition, ikhuthaza inkuthazo, impumelelo kunye nokuthamsanqa okuhle kwimicimbi yothando nakwimicimbi yeshishini. ilitye linceda inkqubo yokwetyisa, lifake izondlo, lisuse ityhefu kunye nokugcinwa kolwelo, kwaye linciphise imeko eziwohlokayo zolusu, iinwele, amehlo, kunye namalungu enyama afana nesibindi kunye nepancreas.
Ilitye linqabile kubukhulu obukhulu kunye nomgangatho olungileyo, kodwa izinto zaseIndiya ezinombala womzimba oqinileyo zininzi kwaye azibizi kakhulu. Oku kunethamsanqa, kuba izinto zihlala zinqunyulwe kakuhle kwaye zinomtsalane kakhulu. Nge-sheen eluhlaza okwesibhakabhaka, olona hlobo luxabisekileyo, kunqabile ukuba lwenziwe ngobukhulu ngaphezulu kwe-15 ukuya kwi-20 carats.
Ngokuya ngeenkwenkwezi ngokubanzi kufanele ukuba kunxitywe kumnwe omncinci wesandla sasekunene. Loluphi usuku kunye nelitye ekufuneka linxitywe? Iziphumo ezilungileyo zeenkwenkwezi, umntu kufuneka anxibe ilitye elinqabileyo ngentsasa yangoMvulo phakathi kwe-5 ukuya kwe-7 kusasa kwiintsuku zeShukla paksha.
Nangona iidayimani, ngaphandle kwamathandabuzo, zezona zinto zinamatye anqabileyo eeringi zokuzibandakanya, kwisibini esifuna ukubonwa okwahlukileyo, kwe-bohemian nangokwemvelo ngakumbi, ilitye lenyanga elithetha enye into ebalaseleyo. Ikristale yelitye lenyanga ihlala isetyenziselwa ubucwebe njengomsongo, iringi, amacici, isongo kunye neependenti.
Ukuba ufuna ukuyinxiba yonke imihla, qiniseka ukuba izinziswe ngokukhuselekileyo kwizinto zokuhombisa kwaye kungcono ukunqanda nawuphi na umsebenzi owenzayo qho xa uyinxiba. Ukufumana izibonelelo ezivela kwikristale, ukunxiba iringi yesilivere yeyona ndlela ilungileyo.
Abanye bakholelwa ukuba kunokuzisa isiqabu kwiingxaki zokuya exesheni, kuthintele ukugcinwa kwamanzi, kucocwe inkqubo yokwetyisa, kwaye kunciphise ukutyeba kakhulu. Unxibelelene nesithsaba, iliso lesithathu, kunye nentliziyo chakras, ithoba kwaye isuse uxinzelelo ngelixa ikhupha uthando lwazo zonke iintlobo.
Khanyisa umendo omncinci ebumnyameni ngomkhondo wenyanga encinci okanye uwongeze kwigadi yefashoni ukukhanya okungaphezulu kobusuku. Ilitye lifunxa ukukhanya emini lize likhanye ukuya kuthi ga kwiiyure ezintathu ebusuku.
I-Adularescence kufanele, iblue. I-sheen kufuneka ijolise phezulu kwi-cabochon, kwaye kufuneka ibonwe ngokulula kuluhlu olubanzi lwee-angles zokujonga. Ukuba i-adularescence ibonakala kuphela ngaphakathi komda wokubukela othintelweyo, ixabiso lalo liyehla. Inokufumaneka kwiindidi zomzimba. Ikristale yelitye lenyanga ihlala isetyenziselwa ubucwebe njengomsongo, iringi, amacici, isongo kunye neependenti.
Ukufaka iikristali emanzini okanye kwityuwa yamanzi kunokubangela umonakalo ongenakuguqulwa kwiikristali zakho. Eminye imizekelo yeekristali ezingenakuhlanjululwa emanzini zonke iintlobo ze-calcite, iiminerali ze-gypsum, i-azurite, i-kyanite kunye ne-kunzite ukubiza nje ezimbalwa.
I-sodium potassium aluminium silicate kunye nefomula yamachiza (Na, K) AlSi3O8 kwaye yeqela le-feldspar.
I-Opal yifom ye-silica ene-hydrated. Umxholo wamanzi unokuvela kwi-3 ukuya kwi-21% ngokobunzima, kodwa ihlala iphakathi kwe-6 kunye ne-10%.
Ewe lilitye eliyigugu, lilungu losapho lwe-feldspar ekwabandakanya labradorite kwaye Sunstone, kunye nelitye lenyanga kunye amazonite. Yenziwe ngamaminerali amabini: orthoclase kunye ne-albite, eyakheka kwimaleko embumbeke ngaphakathi kwelitye.
Inceda ukunciphisa uxinzelelo lweemvakalelo, iyenza lula ingqondo nomzimba wethu ukuba ulale. Eli litye lalide lisetyenziswe kumaxesha amandulo njengelitye lokulala. Eli litye lithwala amandla enyanga entsha, efanekisela iziqalo ezintsha. Ungalisebenzisa eli litye xa uhamba kwinqanaba elibi ebomini bakho.
Ilitye lenyanga lendalo liyathengiswa kwivenkile yethu yegem
Senza ubucwebe belitye lenyanga yesiko njengamakhonkco okuzibandakanya, izacholo zomqala, amacici e-stud, izacholo, namacici… Nceda Qhagamshelana nathi ngesicatshulwa.
Ilitye lenyanga elimnyama lenyanga 4.78 ct
Ilitye lenyanga elimnyama lenyanga 3.10 ct
Ilitye lenyanga elimnyama lenyanga 3.23 ct
Ilitye lenyanga elimnyama lenyanga 5.23 ct
Ilitye lenyanga elimnyama lenyanga 3.00 ct
Ingxelo IweMpathombi 5.58 CT
Ilitye lenyanga elimnyama lenyanga 9.54 ct
Ingxelo IweMpathombi 4.26 CT